MACLUUMAADKA TARANKA EEYAHA VIZSLA IYO SAWIRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka Eeyaha Vizsla iyo Sawiro
Liiska eeyaha Vizsla Mix Dabiiciga ah
Hungary Timo gaaban oo tilmaamaya timo gaaban
Vizsla waa eey ugaarsi dhexdhexaad ah. Jirka xoogga badan ayaa ka yara dheer dherarkiisa. Madaxa qafiifka ah ee cufan ayaa caato ah oo muruq ah oo ballaadhan oo dhegaha u dhexeeya iyada oo khadad dhexdhexaad ahi hoos uga sii socdaan wejiga. Afka muuska ayaa si tartiib tartiib ah uga bilaabmaya joogsiga ilaa sanka waana dherer la mid ah ama ka gaaban qalfoofka. Sanku waa midab midabkiisu ka duwan yahay jaakadda. Qoorta ayaa xoog leh oo aan lahayn dharab. Ilkaha waxay ku kulmaan qaniinyada maqaska. Indhaha dhexdhexaadka ah waxay ka soo horjeedaan midabka jaakadda. Dhegaha dhaadheer waa kuwo dhuuban oo dhuuban, oo u laalaada meel ku dhow dhabannada iyaga oo wata talooyin wareegsan. Dabada waa mid qaro weyn oo xididka ku jirta waxaana si caadiya loogu soo xiraa 2/3 dhererkeedii hore. Fiiro gaar ah: dabo istaaggu waa sharci darro inta badan Yurub. Lugaha hore waxay ku toosan yihiin cagaha bisad u eg. Waxaa inta badan laga saaraa soo deynta. Koodhka gaaban, ee jilicsan ayaa ku dhegsan jirka oo dhan wuxuuna ku yimaadaa midab miridh-dahab ah oo leh hoos kala duwan oo jidhka ah.
Vizsla waa mid cabiran, dabacsan oo kalgacal leh. Keen oo tababbar heer sare ah, waxay u baahan tahay dhiirrigelin maskaxeed maalinle ah. Waxay u baahan tahay bukaan, deggen, gacan adag. Haddii noocani uusan kuu arkin inaad tahay qof awood leh waxay noqon doontaa mid madax adag. Lagu kalsoonaan karo carruurta, jecel inuu ciyaaro saacado. Haddii aan jimicsi ballaaran la helin eeyahaani waxay noqon karaan kuwo firfircoon oo aad ugu fiicnaan kara socod baradka aadka u yaryar, laakiin aad ayey ugu fiican yihiin carruurta firfircoon. Awood u leh inuu si dhakhso leh ula qabsado nolosha qoyska, guud ahaanna way ku fiican yihiin eeyaha kale. Iyagu waa ciyaartooy aad u firfircoon, markay jimicsi la'aana waxay noqon karaan kuwo wax dumiya ama neerfaha kiciya. Si wanaagsan u la dhaqan dadka, meelaha, buuqa, eeyaha iyo xoolaha kale . Aad bay muhiim u tahay inaad adeecdo tababbarkaaga Vizsla. Layli la'aan jimicsi, waxay noqon karaan kuwo si xad dhaaf ah u hammuun qaba, oo hareerahaaga ka ag dhawaada iyagoo faraxsan. Noocani waa mid si heer sare ah loo tababaran karo oo aad u raalli gelinaya - haddii aad ka heli karto inay fahmaan waxa dhabta ah ee aad iyaga ka rabto. Haddii aadan tababarin noocyadan waxaa laga yaabaa inay adkaato in la maareeyo oo la xakameeyo. Tusaale: Eeg Fiidiyowga Vizsla oo u baahan jimicsi dheeri ah. U fiirso sida ay aad ugu haminayso-in-ay-ka farxiso eeyga, haddana iyadu waxay yeelatay tamar ka badan inta ay ogtahay waxa lagu sameeyo. Way cadahay inay culeys badan tahay oo aysan dabacsaneyn. Vizslas waxay u muuqdaan calalin . Noocani maaha mid loogu talagalay qof walba. Haddii aad rabto eey deggan oo aadan rabin inaad ku lugeyso dhowr mayl ama orod ugu yaraan hal mayl maalintii, ha dooran Vizsla. Haddii aan la helin jimicsi habboon, waxay si fudud u noqon karaan kuwo heer sare ah. Waxay leeyihiin hibooyin badan sida: raad raac, dib u soo helid, tilmaamid, ilaalin iyo u hogaansanaan tartan. Vizsla waa eey ugaarsi ah waxaana laga yaabaa inuu ku fiican yahay bisadaha ay ku soo koreen, laakiin waa inaan lagu aaminin xayawaanka sida hamster , bakaylaha iyo doofaarka guinea iwm Hubso inaad had iyo jeer noqoto eeygaaga hogaamiyaha xirmada si looga fogaado wixii dhaqan xumo ah sida ilaalinta alaabta guriga , cuntada, alaabta lagu ciyaaro iyo wixii la mid ah. Vizslas isku dheelitiran oo hela jimicsi ku filan isla markaana leh milkiilayaal runti hogaamiyayaal xirmo ma lahaan doonaan arimahan. Dabeecadahaan waa la rogi karaa markii milkiilayaashu ay bilaabaan inay muujiyaan hoggaamin, anshax iyo inay bixiyaan jimicsi ku filan, labadaba maskaxiyan iyo jir ahaanba.
shih tzu pekingese macluumaad isku dhafan
Dhererka: Ragga 22 - 26 inji (56 - 66 cm) Dumarka 20 - 24 inji (51 - 61 cm)
Miisaanka: Ragga 45 - 60 rodol (20 - 27 kg) Dumarka 40 - 55 rodol (18 - 25 kg)
4 bil sarkaal labrador jir
Vizsla laguma talinayo nolosha guriga. Waa mid dhex dhexaad firfircoon ka shaqeeya waxayna ku fiican tahay ugu yaraan deyr dhexdhexaad ah.
Tani waa eey firfircoon oo firfircoon lehna adkeyn. Waxay u baahan tahay in la qaato maalin kasta, dheer, socod degdeg ah ama orod. Waxay ka dhigeysaa wehel roon roor ama baaskiil wehel. Intaa waxaa sii dheer, waxay u baahan tahay fursad badan oo ay ku ordo, oo laga doorbido xarigga aagga nabdoon. Haddii eeyahaas loo oggol yahay inay caajisaan, oo aan maalinna la socon ama la orod, waxay noqon karaan kuwo wax dumiya oo bilaaba inay soo bandhigaan dhibaatooyin badan oo xagga habdhaqanka ah.
Koodhadhkan jilicsan, ee gaaban ayaa si fudud loogu hayn karaa xaaladdiisa ugu sarraysa Ku caday burush adag, iyo shaambo marmar qalaji. Ku maydh saabuun khafiif ah oo keliya markii loo baahdo. Ciddiyaha waa in lagu hayaa iyadoo la jarjaray. Eeyahaani waa celcelis daadiyayaal.
Vizslas waxaa lagu sawiray xoqitaanno ku taariikheysan qarnigii 10aad. Waxay asal ahaan ka soo jeedaan Hungary oo ay soo jiiteen Magyarayaashu, kuwaas oo u adeegsan jiray eeyo ugaarsi ah. Waxaa loo maleynayaa inay ka soo farcameen dhowr nooc oo tilmaamyo ay la socdaan ah Transundeniya Hound iyo Eey Yellow Turkish ah (hadda bakhtiyey ). 'Vizsla' waxaa loola jeedaa 'tilmaame' af Hungarian. Eeyadu waxay u shaqeeyeen sidii ugaadhsade, sankooda san iyo tamarta aan dhamaadka lahayn waxay ku hageen iyaga inay ku fiicnaadaan soo qabashada ugaarta sare sida shimbiraha iyo bakaylaha. Noocani wuxuu ku dhawaaday inuu dabar go'ay Dagaalkii Labaad ee Adduunka kadib. Dagaalkii ka dib, markii ay Ruushku la wareegeen Hungary, waxaa laga baqay in isirku ka baaba'o jiritaanka. Isku day la doonayo in lagu badbaadiyo taranka, dadka reer Hangari ee dhaladka ah ayaa eeyaha qaar u dhoofiyay America iyo Austria. Vizsla waxay leedahay laba ilma-adeer, midkood oo leh timo-adag oo loo yaqaan 'the Hawlgab Wirehaired tan kalena Vizsla oo timo dhaadheer leh. Timaha dhaadheer waxay ku dhalan karaan qashinka siman iyo kuwa siligga leh, in kastoo tani ay tahay dhacdo naadir ah. Vizslas-ka dhaadheer ayaan ka diiwaan gashanayn adduunka oo dhan, laakiin qaar ayaa laga heli karaa Yurub. Qaar ka mid ah hibooyinka Vizsla waxaa ka mid ah retriever, tilmaame, ugaadhsade shimbiraha ciyaarta, tartamada adeecida, kacsanaanta iyo ilaaliyaha.
timo gaaban american spaniel timo gaaban
Eyga qaangaarka ah ee Vizsla — Sawir waxaa iska leh David Hancock
'Kuwani waa sawirro aan ka qaadnay ardaygeenna Vizsla Patton markii uu yaraa in ka badan saddex bilood. Wuxuu ku nool yahay naanaysta 'Vasiasil Vizsla'. Wuxuu u nool yahay sidii uu wax uga soo heli lahaa dhulka iyo biyaha, wuxuuna jecel yahay in lagu raadsado cariish leh urta digaagduur. Wuxuu ahaa mid aad ufudud in la tababaro. Sababtaas awgeed waxaan tixgelineynaa inaan ku tartamno tijaabooyinka adeecida iyo ilaalinta ugaarsiga madadaalo.
`` Laakiin isagu waa caqli badan tahay inaan hubinno inuusan si fudud nooga shaqeyneynin daaweyn. Isagu waa eyga ugu miisaaman xaafada . Layli la'aan iyo dulqaad la'aan, tababar adag, si kastaba ha noqotee, uma maleyneyno inuu sidan ku sii ahaan doono. Waa lagama maarmaan inaad noqoto hogaamiye xirmo. Haddii kale, wuxuu ku dul socon lahaa aniga iyo xaaskeyga oo dhan, isagoo dooranaya amarrada la raacayo ikhtiyaarkiisa.
ceelka lo'da lo'da isku qas
Waxaan soconnaa / socodsiineynaa Patton ugu yaraan 45 daqiiqo subax kasta, roob ama iftiin. Waxaan sidoo kale siineynaa waqti uu ku 'ugaarsado' marka aan dul dhigno xadhig 20-cag ah si uu ula soo baxo oo ula socdo. Tani waxay isaga siisaa waqti badan oo ur ah dhamaadka jimicsigiisa caadiga ah, sidoo kale waxay noo ogolaaneysaa inaan ka shaqeyno kala duwanaanshihiisa iyo cidhibtiisa. Taabashada dareenkiisa jilicsan ayaa ka dhigeysa mid ku qanacsan. Waxaad ku arkeysaa dadaalka iyo ujeedka wejigiisa markuu shaqeynayo.
Fiid kasta wuxuu aadaa xaafadda park eey , halkaas oo uu qayb ka yahay xirmo caadi ah oo la mid ah, eeyo deggan. Isku darka jimicsiga, tababarka adeecida iyo is dhexgalka bulshada ayaa ka hortagey dhaqan xumo kasta oo lagu horumariyo.
'Had iyo jeer xusuusnow: Vizsla daalan waa Vizsla faraxsan. Waxay u baahan yihiin inay ordaan oo isjecel yihiin.
Qoriga Vizsla oo tilmaamaya
Illie Vizsla ayaa sugeysa amarka milkiilaheeda
Kani waa 'Kadar aka Digger's Reusing Rebel.
Toby eeyaha Vizsla ee 11 toddobaad jira
Eeg tusaalooyin badan oo Vizsla ah
Vizsla Sawirada 1
Vizsla Sawirada 2
Vizsla Sawirada 3
Vizsla Sawirada 4
Eeyaha Vizsla: Sawirada Guryaha La Uruurin Karo
belgian malinois madow iyo tan
Yorkshire isku darka Pit la Malta
eey buurta bernese isku darka adhijir Jarmal